Soo dejisan Movavi Screen Capture Studio 10.2 – Vessoft
WindowsSawireynta iyo qaabeyntaScreenshotsMovavi Screen Capture Studio
Bogga rasmiga ah: Movavi Screen Capture Studio
Movavi Qabsashada Screen Studio – software ah in ay qabsadaan video ka screen oo waxaad ka samaysaa Screenshot ah. software The waa inay awoodaan inay qoraan wax walba oo dhacaya on shaashadda: maris ah kulan video, wicitaanada ee Skype, daawashada of video on YouTube iyo aad u badan. Movavi Studio Qabsashada Screen kuu ogolaanayaa inaad Customize aagga screen qabtay, FPS, nidaamka dhawaaqa, keyboard iyo falalka mouse. Sidoo kale software ku jira editor ka dhisay-in video kaas oo bixiya processing dhamaystiran oo ah files video duubay. Movavi Studio Qabsashada Screen u saamaxaaya in ay badbaadin video ku abuuray qaabab warbaahinta kala duwan iyo iyaga geliyaan in ay internet-ka.
Xogta wax falalka shaashadda
Qabsashada falalka keyboard iyo mouse
Qabsashada codka ka qalab kala duwan
Tafatirka iyo diinta of video kaydiyaa
Soo dejisan Movavi Screen Capture Studio
Faallo ku saabsan Movavi Screen Capture Studio
Movavi Screen Capture Studio Xirfadaha la xiriira
Rikoodh Fidinta Muuqaalka bilaashka ah – waa qalab is haysta oo ka soo baxa fiidiyowga iyo sawirrada shaashaddaada. Software wuxuu kuu oggolaanayaa inuu keydiyo faylasha fiidiyoowga ah ee qaabka AVI iyo loo qabto shaashadda shaashadda oo dhan.
Xoogbadane editor sawiro si ay u abuuraan iyo edit tiirarkii. Software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u soo bixi saamaynta dheeraad ah iyo qalab si sanamyadooda la shaqeeyaan.